Hurukuro Pamusoro paMushakabvu Mujuru Yoburitsa Kusawirirana muZanu PF
Gunyana 22, 2011
Vanga vari mudare vanoti zvakaitika zvakanyadzisa zvikuru
Kusawirirana mubato reZanu PF kunonzi kwakabuda pachena mudare reparamende neChitatu apo nhengo dzebato iri mudare uye dzichinzi dziri kudivi rinonzi rinotungamirwa negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika VaEmmmerson Mnangagwa, vakabuda mudare panguva yaitarisirwa kukurukurwa nezvehupenyu pamwe nekushaya kwevakambove mukuru wemauto, VaSolomon Mujuru.
Nhengo yebato iri VaKudakwashe Bhasikiti, avo vanomirira Mwenezi East, vanonzi vakanga votanga kuisa pamberi pedare chido chavo chekuti vanhu vakurukure pamusoro pehupenyu nerufu rwaVaMujuru avo vakatsvira mumba mavo papurazi ravo ku Beatrice mwedzi wapera, apo dzimwe nhengo dzeZanu PF dzakatanga kubuda mudare iri.
Vakanga vari mudare vati zvakaitika zvakanyadzisa nekuti imwezve nhengo yeZanu PF mudare VaPaul Mazikana vakati nyaya iyi imbomira kutaurwa nezvayo nekuti mudare maiva nevanhu vashoma.
Nhengo yedare vachimirira MDC-T, uye vari mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko, VaMurisi Zwizwai vaudza Stduio 7 kuti zvakaitika mudare neChitatu zvino ratidza kudzama kwakaita kusawirirana muZanu PF pane zvioonekwa kunze.
Mukokeri wenhengo dzeZanu PF muparamende VaJoram Gumbo vaudzawo Studio 7 kuti nyaya iyi haineyi nekusawirirana mukati mebato ravo, asi kuti painge pasina vanhu vakakwana kuti nyaya iyi izeyiwe mudare.
VaGumbo vati pane vanhu vari kuda kukonzeresa kusawirirana mubato ravo, vakati VaMujuru munhu airemekedzwa nevanhu vose naizvozvo nyaya yavo ichadzoka mudare kuti ikurukurwe nezvayo.